Ganacsade Lagu dilay Konfur Afrika.
Allaha unaxariistee Waxaa Caawa Konfur Afrika Lagu dilay Maxamed Ismaaciil Kiish, oo kamid ahaa Odayaasha ugu magaca dheer Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Konfur Afrika, Caawa ayaana lagu dilay Dukaankiisa oo ku yaalla Magaalada East London ee Dalkani Koonfur Afrika.
Dhagarqabayaal hubaysan ayaa Ganacsade Kiish Goobtiisa Ganacsi ugu galay oo Toogtay, islamarkaana dhacay Dukaanka, waxayna jebiyeen CCTV-da Dukaanka ku xirneyd, si aan loo aqoonsan, waxaana sidaasi xaqiijiyey mid kamida Soomaalida deegaanka.
Booliska oo tagay goobga dilka kadib, ayaa wada baaritaano aan ka duwaneyn kuwii hore, xilli ay gacan ku dhiiglayaashii carareen.
« Ra”isul Wasaare Rooble maxuu u sheegay Qoyska ikraan Tahliil ?
Maanta oo Bishu tahay 10 October Ayaa loo Qorsheeyay inay dhacdo Doorashada Madaxweynaha »